Tag: fanentanana | Martech Zone
Ny Psychology sy ROI ny loko
Zoma, Jona 5, 2020 Asabotsy, Jona 6, 2020 Douglas Karr
Mpitsentsitra infografika miloko aho… efa namoaka ny fomba fandikan'ny lahy sy ny vavy ny loko, ny loko, ny fihetsem-po ary ny marika ary na misy akony amin'ny fividianana fividianana na tsia ny loko. Ity infographic ity dia milaza antsipiriany momba ny psikolojia ary na ny fiverenan'ny fampiasam-bola mety ho azon'ny orinasa iray aza amin'ny fifantohana amin'ny loko ampiasain'izy ireo mandritra ny zavatra niainany. Ny fientanam-po ateraky ny loko dia mifototra amin'ny zavatra niainan'ny tena manokana fa tsy tamin'ny zavatra nolazaina tamin'izy ireo fa natao hisolo tena azy ireo. Ny loko mena mety
Ny siansa amin'ny marketing marketing
Asabotsy, Aprily 14, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Tamin'ity volana ity dia nanana photoshoots 2 izahay niaraka tamin'ny mpanjifa, horonantsary drone, ary horonan-tsary mpitarika mpitarika… rehetra hanamboarana ny tranokalan'ny mpanjifanay sy ny atiny. Isaky ny mifanakalo ny rakitsary sy horonan-tsary amin'ny tranokalan'ny mpanjifa izahay ary manolo azy amin'ny sarin'ny orinasan'izy ireo, ny mpiasan'izy ireo ary ny mpanjifany… dia manova ny tranokala io, ary mitombo ny fifanakalozana sy ny fifanakalozana. Iray amin'ireo zavatra miafina izay tsy voatery ho fantarintsika rehefa mahita tranokala isika, fa